Axad 19 September 2021
Barnaamijkii Galka Baarista waxa uu toddobaadkan is-barbar dhig ku sameynayaa ururka Talibaan ee dhowaan dib u qabsaday dalka Afghanistan iyo Uururka Al-Shabab ee ka dagaalama Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Galka Baarista: Soomaaliya iyo isu hibeynta xubnaha jirka
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu toddobaadkan ku saabsan xubnaha jirka ee la isku hibeeyo ee lagu badbaadiyo nolosha dadka u baahan, kuwaas oo aad ugu yar Soomaaliya, iyo wax laga qaban karo. Waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay askarta Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ee soo baxsanaya oo sii kordhaya, iyo dowladda Soomaaliya oo qorsheyneysa in dib loo soo celiyo.
Galka Baarista: Khilaaf ka dhex-taagan Talisyada Ciidanka Xoogga Dalka iyo Amisom
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay muran iyo khilaaf u dhaxeeya saraakiisha sare ee ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo wiiqay howl-galladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
Galka Baarista: Xogta howlgalkii laga fuliyey gobolka Sh/Dhexe
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay howlgal muddo bil ka badan ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe oo ciidamada dowladda ay sheegeen inay guulo ka gaareen, islamarkaana gobolka uga sifeeyeen dagaal-yahanada Al-Shabaab.
Galka Baarista: Yaa leh mas'uuliyadda guryaha ku gubta korontada ee Muqdisho?
Barnaamijka Galka Baarista, waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay guryaha ku gabta korontada ee magaalada Muqdisho iyo cidda mas’uulka ka ah, ayada oo shacabka iyo shirkadaha bixiya adeegga korontada ay ku kala aragti duwan yihiin arrintan.
Galka Baarista: Maxaa hoos u dhigay qaadashada tallaalka COVID-19 ee Soomaaliya?
Galka Baarista: Cafis xal ma u noqon karaa mushkiladda Soomaaliya?
Galka Baarista: Ma loo baahan yahay in la beddelo taliyayaasha ciidanka?
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay ma loo baahan yahay in la beddelo taliyayaasha ciidanka Soomaaliya, kadib markii dhaawac uu gaaray kalsoonidii iyo is-aaminaddii ciidanka, taasi oo ka dhalatay isku dhacii qeybo ka mid ah ciidanka ku dhex-maray Muqdisho
Galka Baarista: Sidee Soomaaliya ku gashay xaaladda iminka taagan?
Galka Baarista: Go'aanka ay Kenya ku xireyso xerooyinka qaxootiga
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu toddbaadkan ku saabsan yahay go’aanka ay dowladda Kenya ku xireyso xerada qaxootiga ee Dhadhaab, kaasi oo ay kasoo horjeesteen siyaasiyiinta Soomaalida ee dalkaas.